भकुण्डे बराह पुजा तथा पर्यटकीय मेलामा पर्यटन काव्य यात्रा सम्पन्न ! | ebaglung.com
२०७५ मंसिर ५, बुधबार २०:१७	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार, विविध
कोपिला कंडेल, बागलु्ङ २०७५ मंसिर ५ । बैकुण्ठ पुर्णिमाको अवसर पारेर बा.न.पा १० भकुण्डे स्थित बराह तालमा बराह पुजा तथा पर्यटकीय मेला आजदेखी संचालन भएको छ । मेलाको पहिलो दिन आज साहित्यिक काब्य गोष्ठी तथा नगरस्तरिय अन्तरमाबि हाजीर जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको छ ।
धौलागिरी साहित्य प्रतिष्ठानको आयोजनामा सम्पन्न गरिएको चौथो काब्य यात्रा पर्यटकीय गाउं भकुण्डेमा संचालित मेलामा सम्पन्न गरिएको छ । मेलाको उद्घाटन मेला संचालन समितिका सल्लाहकार एबं पूर्व सांसद नर बहादुर थापाले गरेका थिए ।
सो अवसरमा बोल्दै उनले भकुण्डेलाई पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा चिनाउनका लागि पर्यटन काब्य गोष्ठी महत्वपुर्ण भएको बताए । उनंले यस्ताखाले कार्यक्रमले लुकेर रहेका प्रतिभाको खोजी गर्न एबं कला साहित्य र संस्कृतिको बिकास गर्न मदत पुग्नेमा बताए ।
सो अवसरमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष काजि रोशन धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पसका सह प्राध्यापक डा. दिन बहादुर थापा, सह प्रध्यापक हरी पाण्ड्य, प्राध्यापक सरोज राज पन्त, सर्जक लाल बहादुर थापा नेपाल पत्रकार महासघं बागलुङ शाखाका अध्यक्ष एबं सर्जक दिल श्रीस,सर्जकहरु गुणराज पौडेल कोपिला कंडेल सृजना पन्त बिबि अनुरागी सुमन स्थापित अनिल शमार्, राम अबिरल लगायतले भकुण्डे स्थित बिभिन्न पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रको समेटेर कबिता गजल मुक्तक गीत हाईकु लगायतका सृजना वाचन गरेका थिए । कार्यक्रम धौलागिरी साहित्य प्रतिष्ठान बागलुङका अध्यक्ष काजि रोशनको अध्यक्षता, सदस्य गुणराज पौडेलको स्वागत मन्तब्य र सचिव राम अबिरलको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
यसैबिच मेलाको अवसरमा आयोजित अन्र्तमाबी प्रतियोगितामा सिद्यार्थ शिक्षा सधन प्रथम बिद्यामन्दिर माबि बि समुह व्दितिय र गणेश माबि नारायणस्थान तृतिय भएको आयोजकले बताएका छन् । प्रतियोगितामा नगर क्षेत्र भित्रका १५ बिद्यालयले सहभागिता जनाएका थिए ।